नर्कको यात्रा, लुटको स्वर्ग, विलयको गठबन्धन | Ratopati
नर्कको यात्रा, लुटको स्वर्ग, विलयको गठबन्धन
personझपेन्द्रराज वैद्य exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २३, २०७४ chat_bubble_outline1
यही आश्विन १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता र निर्वाचनमा तालमेल हुने घोषणाले बजार निकै तताएको छ । चिया पसल, बजार र गल्लीहरूमा एकीकरणको तातो हवा निकै चलेको छ । जङ्गली भनिएको माओवादी र राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षमा ठेलागाडीबाट अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्ने पार्टीहरू एकाएक ३६० डिग्रीमा पुगेर पार्टी एकता गर्दैछन् ।
वास्तवमा यो कुनै अनौठो कुरा होइन । स्वभाविक प्रक्रिया हो । विचार र सिद्धान्त मिलेपछि दुईटा पार्टीको आवश्यकता थिएन नै । भन्न जे भने पनि हुन्छ । उनीहरूले अहिलेसम्म आफूलाई कम्युनिस्ट नाम राखेका छन् । तर उनीहरू वास्तविक रूपमा बामपन्थी होइनन् । माक्र्सवादको आधारभूतः सिद्धान्त वर्ग सङ्घर्ष र बल प्रयोगको नीति परित्याग गरेकाले उनीहरूलाई अब कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन । जुन कुरा विप्लवमा ओवादीले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । अब क. मोहन वैद्य किरण र क. मोहनविक्रम सिंहबाट पनि यही कुरा आएको छ– उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् । कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर गएका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पनि सामेल हुने भएको छ । भोलि क्रान्ति चर्कंदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेससहित एउटै मोर्चा बन्ने छ । सिद्धान्त मिलेपछि यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन ।
नेपालमा दर्जनौँ पार्टी भए पनि सारमा दुई धु्रवीय विचारका पार्टीहरू छन् । संसदवादी पार्टी र जनवादी पार्टी । अथवा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र सामन्त, दलाल पुँजीवादी पार्टी । जनवादी पार्टीमा पनि दुई फ्याक्सन छन् । निर्वाचनमा सहभागी र निर्वाचनलाई खारेज गर्ने पार्टी । आआफ्नो सङ्गठन, शक्ति र कार्यनीतिअनुसार बहिष्कार, सशक्त बहिष्कार, उपयोग र निर्वाचनमा भाग लिने कार्य हुन्छ । तर क्रान्ति र परिवर्तन चाहने हो भने खोलामा ढडिया थापेर हुँदैन ।
अबको नयाँ परिस्थितिमा संसदवादको मोहलाई त्यागेर क्रान्तिमा लाग्नुको विकल्प छैन । अब क्रान्तिारीहरू ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ । क्रान्ति गर्ने बेला भएको छैन भन्दै दिन कटाउने हो भने पहिले आर्जन गरेको रातो इतिहास विलय हुन्छ । ढिलो वा चाँडो गोल चक्करवाद पनि एमालेकै लाइनमा पुग्छ । चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग पनि परिस्थिति हेरेर गर्नुपर्छ तर जुन संविधानलाई कालो भनेर जलाइयो त्यसैलाई लागू गर्ने क्रममा उपयोगको नामले संसदवादी चुनावमा भाग लिनु भनेको त्यही संविधानमा सही धस्काएको कुरा ठहर्दछ । यो सामान्य रूपमा चुनावमा भाग लिएको नभएर ऐतिहासिक मोडमा भाग लिएको कुरा आउँछ । सुन्दर र असुन्दरबीच लडाइँ चलेको अवस्था छ । यसबेला चुनाव उपयोग भन्नु प्रतिकृयावादीले उपयोग गरेको महसुस हुन्छ ।
उपयोग तत्कालीन कार्य नीति हो । तर यसले रणनीतिलाई कत्तिको सहयोग गरेको छ भन्ने हो । उपयोग गर्दैमा आँधीबेरीका साथ विरोध गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर क्रान्तिमा नआएर उपयोगमा रमाउँदै बस्ने हो भने जनविश्वास गुम्ने खतरा आउँछ । आखिरीमा व्यवहारमा एमालेकरणको नतिजा आउनसक्छ । यो खास पार्टी विशेषको कुरा नभएर सबै पार्टीमा लागू हुने कुरा हो । अब जति सक्यो चाँडो क्रान्तिकारीहरू धु्रवीकृत हुनुपर्छ । सबैले कुर्सीलाई मात्र हेर्ने हो भने क्रान्ति हुँदैन । क्रान्ति पनि नगर्ने, कुर्सी पनि नछोड्ने हो भने यथास्थितिवादले समाजलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । क्रान्तिन गर्ने बसिरहन्छन्, क्रान्ति गर्ने अगाडि बढिरहन्छन् । माक्र्सवाद एउटा विज्ञान हो । क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । संसारको इतिहासले सावित गरेको छ । नेपालको महान जनयुद्धले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
अहिले एमाले, माके र नयाँ शक्तिको गठबन्धनको असर सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको छ । लोकतान्त्रिक शक्ति भनिने पार्टीमा शङ्का र खैलाबैला भएको छ । आश्विन १८ साँझ नै उनीहरूले काङ्ग्रेस र राजपासमेत ६ दलीय गठबन्धन तयार गरेर ७ सदस्यीय संयोजन समिति तयार गरिसकेका छन् । माकेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर आफ्नै गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्ने योजना उनीहरूको छ । २९७ भोट चाहिनेमा ३०० सय भोट तयार गरिसकेको उनीहरूको दाबी छ । जे होस् नयाँ गठबन्धन तयार भएको छ । क्षणिक लाभका लागि हिजोका खोटा आज नयाँ गठबन्धनका मुखिया बन्ने छन् । आसन्न चुनावको ध्यान राखेर बनेको गठबन्धन हो यो । एकीकृत पार्टीको बिधान र घोषणपत्रको दस्ताबेज समिति पनि बनाइसकेका छन् ।
तर बाम एकता पानीको फोका जस्तै हुनेछ । ६०÷४० प्रतिशत भने पनि उनीहरूको लडाइँ उम्मेदारीमा हुनेछ । सरकार गठनमा खिचातानी हुनेछ । देशले धान्नै नसकने भीमकाय मन्त्रिमण्डल बन्नेछ । छुट्टा छुट्टै पार्टी भएको अवस्थामा त खानेबेला तीन ठूलादलहरू मिलेर खान्थे भने एउटै दलको सरकार भएको अवस्थामा आफ्नै हातमा डाडुपुन्यो हुनेछ । खान पल्केका भ्रष्टहरूले बहुमत देखाएर लुटको स्वर्ग मच्चाउने छन् । पुँजीवादी पार्टीहरूका लागि एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने गठबन्धनले बहुमतको सरकार हुने धेरै सम्भावना छ ।
जहाँसम्म बाम गठबन्धनको कुरा छ प्रथमतः उनीहरू बाम नै होइनन् । नाम मात्र हो । प्रचण्डले क्रमभङ्गको चमत्कार भनेको पुँजीवादमा जाने क्रमभङ्ग हो । माओवाद फाल्ने प्रपञ्चहो । प्रचण्ड शब्दको भार बिसाउने प्रपञ्च हो प्रतिक्रियावादमा विलय हुने छलाङ हो । कहिले रुखमा त कहिले सूर्यामा भोट । सत्तामा बसेर रमाउनपाए सबै पुग्छ । एमालेमा पनि सत्तामुखी चिन्तन छ । भ्रामक राष्ट्रवादी नारा छ । आईएनजीओबाट आर्जित धनराशि छ । यो गठबन्धन निर्माण हुनुको २, ३ कारण छन् । एउटा कारण त मधेशमा भएको निर्वाचनमा एमाले चौथो हुनपुग्यो । माओवादी केन्द्र धेरै ठाउँबाट ओह्रालो लाग्दै गयो । जनशक्ति पार्टीलाई पार्टी धान्न धौधौ भयो । डा. भट्टराईको शब्दमा पनि गठबन्धन हुनु आवश्यकता थियो । मुख्य कारण सबैको चासो र आवश्यकता चुनावको थियो । यस गठबन्धनमा चाइनाको पनि हात रहेको बुझिन्छ । भारतले पनि बामबाट भन्दा प्रजातान्त्रिक शक्तिबाट फाइदा लिन उचित ठान्यो । अर्को कारण भनेको नेकपा हो, जसले संसदवादीहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । यसको सामना गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।
संसदवादीहरू एकातिर शक्ति सञ्चय गर्दैछन् । अर्काेतिर क्रान्तिकारीहरू पनि ध्रुवीकृत हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा दुई ध्रुवीय धार छन् । एउटा संसदवादी छ भने अर्को क्रान्तिकारी धार छ । अहिले एमाले र माकेले तथा नयाँ शक्तिले नर्कको बाटो लागेर लुटको स्वर्गमा रमाउन लागिपरेका छन् । यो उनीहरूको स्वर्थको विषय हो । माकेको समूहमा पनि गोपाल किराँती, मातृका यादव, मणि थापा र प्रभु शाहले यस किसिमको गठबन्धनको विरोध जनाएका छन् । माकेको वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले पनि असुन्तुष्टी जनाएको कुरा छापामा आएका छन् । माकेका क्रान्तिकारीहरू देशको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएर क्रान्तिकारी लाइामा आउन जुर्मुराइ रहेका छन् ।
अब नर्कको बाटो होइन मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्ग र उपेक्षित वर्गको मुक्ति र समाज रूपान्तरणका लागि देशभक्त, राष्ट्रवादी तथा विस्तारवाद र साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति एक जुट भएर नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो हुँदै वैज्ञानिक समाजवादका लागि एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । अहिले बेरोजगारी व्याप्त छ । दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन हुनपुगेका छन् । देशको श्रम शक्ति विदेशमा खर्च भएको छ । महँगीले आकास छोएको छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल छ । लुट्नेले लुटिरहेका छन् । भोकै बस्ने भोक भोकै मरिरहेछन् । भूकम्पपीडित र बाढीपीडित खाली आकासमुनि जीवन व्यतित गरिरहेछन् । सहिद परिवार, अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारले कष्टकर जीवन बिताइरहेछन् । यिनैको भर्याङ् बनाएर माके पुँजीवादमा रमाउन पुगिरहेको छ ।
अब आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । यसमा सबै लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, युवक, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, महिला, जनजाति, दलित र राष्ट्रप्रेमीहरूको ठूलो भूमिका छ । सबभन्दा ठूला जनता हुन् । जनताको आँधीबेरी चले कसैको पनि केही लाग्दैन । न्याय, स्वतन्त्रता र शान्ति आजको आवश्यकता हो । जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनता देशको प्रमुख मुद्दा हो ।
Oct. 10, 2017, 5:26 p.m. Lila Nanda Bote
The writing written by the Marxist writer our teacher is best from the point of the Marxism. Actually Marxism emphasizes on the class structure and use of force which is to be implemented byareal revolutionary partyasole and leading capacity leader of NCP Mr. Netra Bikram Chanda. Lila Nanda Bote Kathmandu
चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध : अवश्यम्भावी जोखिम
गणतन्त्र, सुशासन नयाँ राष्ट्रिय एकता
विगत होइन, भविष्य देखाऔँ